Ihe ị ga-ahụ na obodo Switzerland nke Basel | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Getaways Europe, Switzerland
La Basel obodo Ọ bụ otu n'ime ndị kasị biri na Switzerland, ịbụ nke abụọ dị mkpa mgbe obodo Zurich gasịrị. Obodo a dị n'akụkụ France na Germany ma nwee ọdụ ụgbọ mmiri na Rhine.
Ka anyị lee ihe bụ ebe ndị ahụ anyị pụrụ ịhụ na Switzerland obodo nke Basel, obodo nke akuko ihe omuma ya malitere na Celtic settlements of XNUMXth century BC. de C. Obodo a nwere ike ịghọ ezigbo ebe maka ezumike nke ịnụ ụtọ akụkọ ihe mere eme na ebe ndị mara mma.
1 Katidral Basel
2 Choputa osimiri Rhine
3 Steinenvorstadt, okporo ụzọ ya kachasị ndụ
4 Ellọ Nzukọ Obodo Basel
5 Altstadt, obodo ochie
6 Park Kannenfeld, ebe izuike
7 Ahia ahia na Marktplatz na ngwụsị izu
8 Asụsụ Asụsụ
Katidral Basel, a na-akpọkwa ya Okechukwu Nwachukwu ọ bụ otu n'ime ụlọ ya kachasị mkpa. Ọ bụ katidral nke ewughachiri na narị afọ nke XNUMX mgbe ala ọma jijiji mechara. Katidral a na-apụ apụ maka inwe ihe na-acha ọbara ọbara nke na-enye ya ọdịdị pụrụ iche, ma e jiri ya tụnyere katidral ndị a na-ahụkarị. Na mgbakwunye, ọ nwere ụlọ elu iri isii na isii na-enye nnukwu echiche nke obodo ahụ. Achọpụtaghị na katidral a naanị site na mpụga, mana enwere ike ịhụ ya site n'ime. Na Switzerland, eziokwu ga-abụ na chọọchị dị iche iche enwechaghị ihe ịchọ mma, ọ ga-emetụta anyị. Na Katidral a, e nwekwara ili nke Erasmus nke Rotterdam na mgbe ụfọdụ a na-eme egwu n'ime katidral ahụ. Na azụ obodo ahụ ọ ga-ekwe omume ịnụ ụtọ echiche na oke echiche nke osimiri Rhine na akụkụ ọhụrụ nke obodo ahụ. N'ihu ebe anyị hụrụ square Münsterplatz, nke nwere ụlọ mara mma nke na-enye ndị ọbịa ọmarịcha mma.
Choputa osimiri Rhine
Osimiri Rhine bụ otu n'ime ebe nkiri obodo ahụ, ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ịga ije na ọdụ abụọ. Otu ihe na-adọrọ mmasị bụ nsọtụ mpaghara ochie. N'oge ọkọchị, ọ ga-ekwe omume ịhụ ọtụtụ ndị na-asa ahụ na mmiri, ihe dị egwu. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume ịrụ a obere ụgbọ mmiri na osimiri Rhine na-enwe obi ụtọ na echiche nke ụlọ akụ na mpaghara abụọ nke obodo ahụ, ebe ọ bụ na osimiri ahụ kewara mpaghara ochie na nke ọhụrụ. Na mpaghara a anyị ga - ahụkwa ọtụtụ ihe ntụchi na - enye ikuku n’abalị na ngwụcha izu.
Steinenvorstadt, okporo ụzọ ya kachasị ndụ
Okporo ámá a bụ ezigbo ebe ezumike, ebe ọ bụ na ọ bụ amara dika sinima n'okporo ámá, n’ihi na ọ bụ ebe a ka ụlọ ahịa sinima nke obodo dị. Mana n'ime ya ọ ga-ekwe omume ịchọta ụlọ nri, ụlọ mmanya na ebe a na-ere ice cream. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ otu n'ime mpaghara nwere ike zuo oke iji hụ ma anyị na ụmụaka aga njem, ebe ọ bụ na a ga-anabata ha nke ọma.
Ellọ Nzukọ Obodo Basel
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ịhụ ụlọ na-ahụkarị n'ụdị Basel, mgbe ahụ ị nwere ike ịkwụsị ịmasi ya Rathaus ma ọ bụ nnukwu ọnụ ụlọ obodo. Buildinglọ a nke nwere ọkara narị afọ ga-apụta maka agba ya na-acha ọbara ọbara na-emetụ ọla edo. Ọ na-anọchi maka ụlọ elu, mbara ihu mara mma nke na-apụ apụ na facade nakwa maka ụlọ elu ndị ahụ dị egwu a na-ahụ na ụfọdụ obodo Europe.
Altstadt, obodo ochie
Otu n'ime ebe kachasị mma nke obodo ahụ bụ obodo ochie ya, ebe enwere ụlọ akụkọ ihe mere eme dịka nnukwu ọnụ ụlọ obodo ma ọ bụ katidral. Ezigbo atụmatụ mejupụtara jee ije site na obodo ochie n’enweghị ọsọ ọsọ, ịnụ ụtọ cobbled n'okporo ámá na obere, ọmarịcha na-ahụkarị ụlọ. Ọzọkwa, na mpaghara a anyị nwere ike ịchọta ebe ị ga-enwe biya biya dị jụụ.
Park Kannenfeld, ebe izuike
Obodo Basel, dị ka ọtụtụ obodo ndị ọzọ dị na Europe, bụ ebe nwere ọtụtụ oghere na-eme ka ọ dị mfe ịnyara mmiri. Otu n’ime ha bụ Kannenfeld Park, otu nnukwu ogige nke ezinụlọ na-agakarị ebe a na-eme achịcha na ebe a na-esi nri. N'ime ogige a, enwere oge ezumike maka ụmụaka na tebụl ping pong. Ebe zuru oke iji zuru ike.
Ahia ahia na Marktplatz na ngwụsị izu
Na Marktplatz ị ga-ahụ obodo àkpịrị, ma ọ bụ naanị ná ngwụsị izu. Ọ bụrụ na anyị dabaa n'ahịa a, ọ bụ ebe zuru oke ịnụ ụtọ ngwaahịa, akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi ọhụrụ na ebe ịzụta okooko osisi ọhụrụ. Oghere iji hụ ezigbo aka dị na obodo.
Nke a isi mmalite dị oke mmasi, ebe ọ nwere ụdị ígwè nke na-eji ike mmiri eme ihe. Ọ bụ a mara mma nke ukwuu ma n'ezie peculiar isi iyi na-abụkarị a mgbe foto na obodo. Na mgbakwunye, obodo na-enwekarị ọnụ ọgụgụ buru ibu na ogige ntụrụndụ, nke na-eme ka ọ maa mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Ihe ị ga-ahụ na Basel, Switzerland